फुजेल हत्याकाण्ड: रामप्रसाद अधिकारी पक्राउ
काठमाडौं। गोरखाका कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्या प्रकरणमा संलग्न भएको अभियोग लागेका रामप्रसाद अधिकारीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनको टोलीले शनिबार राति काठमाडौंको बालाजुबाट पक्राउ गरेको छ । लामो समयदेखि फरार अधिकारीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनको प्रहरी...
काठमाडौँ। अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगम (आइएफसी) ले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा १० प्रतिशत सेयर लगानी गर्ने भएको छ। उक्त आयोजनामा लगानी गर्ने सम्बन्धी सम्झौतामा आगामी सोमबार प्रवद्र्धक कम्पनी ग्रान्धी मल्लिकार्जुन राव (जीएमआर) र आइएफसीबीच सम्झौता...
‘निर्णायक’ वार्तामा झनै दुरी बढ्यो
काठमाडौं। नयाँ संविधानको अन्तरबस्तुमा सहमति जुटाउन शनिबार भएको ‘निर्णायक वार्ता’ निष्कर्षविहीन मात्रै नभएर दलहरुबीच दूरी बढाएको छ। बिहान ८ बजेबाट प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुरु भएको बैठक करिब आधा घण्टापछि नै एकीकृत नेकपा माओवादीले बहिस्कार...
मन्त्री खड्कासँग कति छ सम्पत्ति?
काठमाडौँ। सहरी विकास मन्त्री डा नारायण खड्काले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आव २०७०/७१ को सम्पत्ति विवरण पेस गरेका छन्। मन्त्री खड्काको काठमाडौँको खड्का भद्रकालीमा घर जग्गा, गृह जिल्ला उदयपुरमा १५ कट्ठा जग्गा रहेको सम्पत्ति...
माघ ८ : सबैको आ आफ्नै दाउ
काठमाडौं। संविधानसभा निर्वाचनको समयमा दलहरुले गरेको प्रतिवद्धताअनुसार संविधान जारी गर्ने मिति नजिकिदै जाँदा प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरु भने फरक फरक रणनीतिअनुसार अघि बढेका छन्। २०६२-०६३ र त्यसपछिको आन्दोलन गर्ने शक्तिहरु दुई भागमा विभाजित भएका छन्।...
काठमाडौं । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले खुम्बु र त्यस आसपास क्षेत्रमा हिमपहिरोसहित अन्य प्राकृतिक विपत्तिको चेतावनी जारी गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सोलुखुम्बुले सबै सरोकारवालालाई उच्च सतर्क अवस्थामा रहन निर्देशन दिएको छ। नाम्चे बजारको...
सचिव बढुवाको तयारी, को को पर्लान बढुवाको सिफारिसमा?
काठमाडौं। सरकारले सचिव बढुवाको गृहकार्य शुरु गरेको छ। लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष कायोदेवी यमीको अध्यक्षतामा रहेको सचिव वढुवा सिफारिस समितिले संभावित ४२ उम्मेदवारको सूची तयार पार्ने निर्णय गरेको छ। १६ वटा मन्त्रालय र निकायमा सचिव...
‘बैदेशिक रोजगार नीति र ऐन परिमार्जन आवश्यक’
काठमाडौ। श्रम तथ रोजगार मन्त्रालयका सचिव सूर्य श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगार नीति र विदेशी रोजगार ऐन परिमार्जन गर्न आवश्यक भएको बताएका छन्। रासससँग कुरा गर्दै श्रेष्ठले नीति र ऐन पुरानो भैसकेको भन्दै वैदेशिक रोजगारीमा जाने...
विद्यार्थीले संविधानसभामा उङ्ने जुलुस गर्ने
काठमाडौं। विद्यार्थी संगठनहरुले संविधान निर्माणका लागि दवाव दिन संविधानसभा बाहिर उङ्ने जुलुस गर्ने भएका छन्। अनेरास्वियुको कार्यालयमा भएको ११ वटा विद्यार्थी संगठनले ६ सय १ जना निदाएका उङ्ने सभाषदहरुलाई व्यङ्ग गर्दै अभियान गर्दै पुस...
काठमाडौ । सरकारले यातायात व्यवस्थापनका लागि ठूलो समस्या बनेको सिन्डिकेट तोड्न कडा कानून ल्याउने तयारी गरेको छ । सिन्डिकेट तोक्नका लागि व्यवसायीलाई जेल हाल्नेदेखि सवारी रुट पर्मिट सधैंका लागि खारेज गर्ने कानुन ल्याउने तयारी...
« अघिल्ला 1 … 601 602 603 604 605 … 625 पछिल्ला »